ILoft epholileyo kwi-Artful Montana Homestead
Wamkelekile kwiGadi yeNkwenkwezi eYellow! Siyindawo yeholide eyenziwe ngokusingqongileyo kunye nozinzo ekwifama yepermaculture ephantsi kweMission Mountains kwiFlathead Indian Reservation.
Indawo yethu yokuhlala ipholile, i-rustic, kwaye yodwa. Yakhiwa ngumnini ngokwakhe, ngeebhali zeendiza, isikhwebu sodongwe, kunye nekalika. Igcwele i-nooks ezincinci ezithandekayo kunye neekrani, kunye nendawo yokuhlala eqhelekileyo ezantsi, kubandakanywa nekhitshi elula kakhulu yokumisela (i-heater yamanzi ashushu, ifriji, umenzi wekofu, isitovu, isinki - ikofu kunye neti enikeziweyo). Indawo iqhagamshelwe kwindlu enkulu, ngoko ke kukho ukuhanjiswa kwengxolo encinci. Siyazingca ngeflethi yethu encinci ephezulu, kwaye siyathemba ukuba uyakuyifumana inomtsalane njengathi! :)
4.78 ·Izimvo eziyi-193
4.78 · Izimvo eziyi-193
Indlela iGrizzly Hollow Lane kunye nePost Creek zezinye zezona ndlela zindala zelizwekazi laseMntla Melika--ikhaya lembali likaJeremiah Johnson kunye nesikhundla sorhwebo saseFort Connoah. Indawo esikuyo iqhayisa ngamakhonkco etepee amandulo, ukubanjiswa kweentlanzi zakudala kumlambo iFlathead, kunye neepictographs.
Indawo yam ikufutshane neekhilomitha ezingama-65 zeendlela ezifanelekileyo zokuhamba ngebhayisekile; ukuhamba ngeenyawo kwiBob Marshall; izilwanyana zasendle ezininzi; ukuloba echibini okuninzi / ukukhwela inqanawa; i-pow-wows kunye ne-rodeos ngexesha lehlobo; kunye nokunqumla ilizwe lokutyibiliza ekhephini ebusika--kwaye sikuhambo lweyure eyi-1.5 ukusuka eGlacier Park!
Siyavuya ukunceda ngayo nantoni na iindwendwe zethu ezinokufuna! Ukukhwaza nje okanye ukufowuna. Ngaba kunokwenzeka ukuba ujikeleze ukusebenza egadini okanye kwezinye iindawo ekwabelwana ngazo iindwendwe ezinokufikelela kuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint Ignatius